Shirka Jabuuti ka socda iyo Cambaaraynta Mujaahidiinta!!! | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Shirka Jabuuti ka socda iyo Cambaaraynta Mujaahidiinta!!!	Seteembar 17, 2008
Shirka Jabuuti ka socda iyo Cambaaraynta Mujaahidiinta!!!
Arbaco 17 Ramadaan 1429 (17 /09/2008)
Waxay aheyd 9/6/2008 markii ay heshiis kala saxiixdeen kooxda Ridada iyo Ururuka dib xoreynta soomaaliya (UDS) garabka Jabuuti ee uu hor kacayo Sh. Shariif Sh.Axmad. Heshiiskaas qodobadiisa ayaa ahaa:
In jidka wada hadalka loo maro bixitaanka itoobiya.
In dagaalka la joojiyo maleeshiyaadka Ridada aan la weerarin bil ka dib marka heshiiskaas uu dhaco.
In ciidamada itoobiya ay dalka ka baxaan 4bilood ka dib xiliga heshiiska la galay, ka dib Markey ka dalbadaan kooxda Ridadu.
In si isku mid ah loo cambaareeyo kooxdii u hogaansami weyda heshiiskaas lagana beri noqdo mujaahidiinta.
Qodobada shirka ayaa haddii la turjumo sidaas u qoran in kastoo xaga eray bixinta aanay ku jirin Riddo.
Haddaba aan is weydiino ilaa iyo hadda maxaa ka hirgalay heshiiskaas?
Si fudud qof kasta wuxuu ku jawaabi lahaa heshiiska ayaa hal dhinac ka hirgalay ururka dib u xureynta ayaa dhamaan qodobadaas sidooda u fuliyey dhamaantood.
Xabadda ayey joojiyeen, mujaahidiinta inay cambaareeyaan ayey bilaabeen, waxay ka tanaasuleen jihaadka ayagoo qaatay jidka wada hadalka sida uu sheegay Shariif Sh.Axmad Gudoomiyaha (UDS) iyo golihii maxaakimta ee horey u burburay.
Jabuuti waxaa lagu qabtay shirar badan oo u dhexeeyey labada kooxood ee heshiiska ku kala saxiixatay halkaasi, waxayna horay u qaadeen tilaabooyin dhowr ah oo ay ku deminayaan dhuxusha jihaadka kuna go,doominayaan mujaahidiinta.
Kooxda Nuur Cadde iyo kooxda uu hogaamiyo Shariif Sh.Axmed ayaa horay u wada dhisay gudiyo isku dhaf ah oo la sheegay inay ka shaqeyn doonaan Amniga iyo siyaasadda waxaana ka mid ahaa xubnahas.
C/raxmaan C/shakuur, Axmed C/salaan, Cumar Xaashi, Cabdi Qeybdiid, Ibraahim shukri, Darwiish iyo Janaqow iyo kuwa kaloo isku dhaf ah.
Ugu danbeyn hadda waxaa ka soconaya magaalada Jabuuti shir ay kala hogaaminayaan madaxda labada kooxood waa Nuur Cade iyo Shariif Sh. Axmade, waxaana goob joog ah Gaalo badan oo ay ka mid tahay Qaramada midoobay iyo Midowga Afrika sidoo kale Mareykanka ayaa u soo diray wafdi gaar ah oo kormeera shirkan
Waxay sheegeen in maalinta sabtida ah ay si rasmi ah u hirgelin doonaan xabad joojinta, ayagoo si isku mid ah u cambaareeyey weeraradii lagu qaaday ciidamada Calooshood u shaqeystiyaasha AMISOM, waxayna ku tilmaameen in weerar lagu qaado AMISOM ay tahay Weerar lagu qaaday nabadda Soomaaliya.
Waxay ku dheraadeen inay si isku mid ah dhan uga soo jeedsan doonaan qofkii ama kooxdii isku dayda inay ka hor timaato heshiiskan amaba isku dayda inay jebiso xabad joojinta.
Waa nasiib darro wayn oo ku habsatay nimankii shalay ku jiray safka Mujaahidiinta in maanta ay la soo saftaan dhinaca Ridada oo ay cambaareeyaan Jihaadka iyo Mujaahidiinta iyadoo wali dalkii la haysto dadkiina la xasuuqayo, laakiin waxaa ilaahay mahaddii ah in ay jiraan Mujaahidiin aan la siri karin oo Jihaadku dhab ka yahay.